WARBIXIN: 5-waxyaabood oo sabab u ah go’aanka uu Cristiano Ronaldo ku doonayo inuu kaga tago Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 18 Juunyo 2017. Tan iyo sidii ay u soo bexeen dacwadda canshuur lunsiga ee lagu soo oogay Cristiano Ronaldo ayaa waxaa aad isku soo taraya inuu laacibka isaga soo tagayo Spain.
Waxaa la wariyay in Ronaldo uu saaxiibadiisa xulka Portugal u sheegay inay ka go’an tahay inuu isaga tago Real Madrid isla markaana uusan dib ugu soo laaban Spain, inkastoo warar kuwaa ka duwan oo dhawaan gal ah ay tibaaxayaan in Los Blancos ay qaadeyso talaabo kasta si ay u xafidato xiddigeeda iyadoo waliba bixineysa lacagaha canshuuraadka ee lagu soo eedeeyay.
Haddaba Marca ayaa qalinka u qaadatay oo dhiraan-dhirisay sababaha keenaya inuu laacibku doorto inuu ka tago Real Madrid.
1. Waxa uu qabaa dareen ah in dacwadda cashuur lunsiga ah dhaawac ku tahay
Ronaldo ayaa sheegay in uusan dambi lahayn kaddib markii lagu soo oogay dambiga ah inuu lunsaday canshuur dhan 14.7m, wuxuuna qiray inuu sameeyay wax kasta oo waafaqsan shuruucda Spain.
Wuxuu dareemayaa caro iyo inay midaa dhaawaceyso wuxuuna go’aansaday inuusan ka sii ciyaarin horyaalka La Liga.
Wuxuu dareemayaa in saxaafada Spain ay si gaar ah u bartilmaameedsaneyso:
Cristiano Ronaldo waxa uu aaminsan yahay in saxaafadu ay ku takooreyso inuu yahay midka eeda ku leh wax kasta iyadoo ay jirto inay xukumayaan dad aan xitaa aqoon u lahayn isaga.
Xiddiga reer Portugal ayaa midaa u sheegay si aan ganbasho lahayn in qeyb ka mid ah saxaafada ay si gaar ah u takoorto oo ay u dhaleeceyso.
“Waxay ila dhaqmaan sida qof dambiile ah iyagoon xitaa aniga i garaneyn,” CR7 ayaa sidaa horey u yiri.
Wuxuu dareemayaa inuusan Real Madrid ka helin taageeradii uu rabay
Iyadoo ay jirto in Los Blancos ay soo saartay warbixin ay ku taageereyso xiddigeeda isla markaana ku caddeynayso inuusan dambi lahayn ayuu misane Ronaldo dareemayaa inuusan helin taageero ku filan.
Wuxuu doonayaa inuu eegto koox cusub:
Ronaldo wuxuu go’aansaday inuusan dib ugu soo laaban Spain iyadoo ay jirto inay Real Madrid ku jirto waqti guul oo qurux badan iyo Nolosha uu ku heysto caasimada isaga canugiisa iyo gacalisadiisa cusub.
Dooqiisa ugu wayn waa inuu dib ugu laabto kooxdii uu ku soo caan baxay ee Manchester United, riyadaas ayaana iminka rumoobi karta.
Wuxuu dareemayaa in loo takooray si aan caddaalad ahayn:
Caradiisa kuma koobna oo kaliya Real Madrid oo wuxuu sidoo kale u xanaaqsan yahay hannaanka cadaalada ee Spain.
Wuxuu Ronaldo aaminsan yahay in darajadiisa iyo magaca uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda owgeed tusaale looga dhigay si aan cadaalad ahayn oona u dhigmin.